Add new tag | Mg Ogga's Notes
ကျောက္ကာရွှေဂူနီ ဘုရားကိုလ ဖူးမြင်ရစေလို ဘော်ဒါတွေလွမ်းတဲ့စိတ်နဲ. ကြိတ်၍သာငို ကျမျက်ရည်စိုရွှဲ ပျော်ရွှင်စွာဘော်ဒါတွေနဲ. ကဲချင် လှတယ် ကျောင်းဘယ်တော. ဖွင့်မလဲ။ ကျောက္ကာဦး မှာ သောက်ခါအမြဲ မှောက်ကာလဲပြီး လျှောက်ပါဆဲ ကမြင်းကျောထ တဲ့ရက်တွေကို စိတ်ဝယ် သတိရ မန်းတောင်မြေ အရပ်တပါးဆီက တမာမြေတို့ တက္ကသိုလ်ကို မျှော်မိတိုင်းလွမ်းလှတယ်လေး။ ps:မုံရွာ မှာကျောင်းတက် တုန်းက ရေးထားတာ ပါ ကျောင်းပိတ်ရင် ဘော်ဒါတွေလွမ်းလိုလေ မန္တလေး မှာတုန်းက ရေးထားတာ ပထမနှစ် ကျောင်းပိတ်တုန်းက ပေါ့ Advertisements